Tag: Mgbakwunye mmemme | Martech Zone
Tag: Mgbakwunye mmemme
Ka azụmahịa n'ịntanetị na-aga n'ihu na-eto eto, ọkachasị n'oge a nke Covid-19, yana kwa afọ karịa oge ezumike, ụlọ ọrụ obere na midsize na-abanyewanye na ọgụ dijitalụ. Businesseslọ ọrụ ndị a na asọmpi na ndị egwuregwu gbara ọkpụrụkpụ buru ibu, dị ka Amazon na Walmart. Maka azụmaahịa ndị a ka ha nwee ike ịdị asọ ma na asọmpi, ịnwe usoro mgbakwunye mmekọ dị oke mkpa. Martech Zone na-eji mmemme nke mgbakwunye iji mezue mmefu ya na ịkwọ ụgbọala
Onwere otutu ihe mmekorita nke m nwere ma enwere m oke ihe m na akwalite na blọọgụ anyị na site na mmekọrịta. Enwere nsogbu na-atọ ụtọ ma a bịa na mgbasa ozi mmekọ. Imirikiti ohere mmekọ nwere ike ịdabere na klout gị ma ọ bụ ọnụọgụ ndị na-eso ụzọ ị nwere… ọ bụchaghị dabere na mmetụta gị na ikike ịtụgharị atụmanya n'ime ndị ahịa. Mgbakwunye sistemụ niile nọ ebe a mana ChaCha
Ọ bụ Ikpeazụ 10 percent
Mọnde, Jenụwarị 7, 2008 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
N'ime ọnwa ole na ole gara aga, anyị enweela ọpụpụ iri na abụọ nke ọrụ ọhụrụ na ngwa anyị na njikọta anyị. O bu ihe nwute, anyi nwekwara oru ole na ole malitere otutu, otutu onwa gara aga tupu m rute nke na adighi njikere maka mmeputa. Ọ bụghị ndị otu kpatara, mana ọ bụzi ọrụ m ga-arụpụta. Enweghị ajụjụ ọ bụla na enwere m otu egwuregwu na teknụzụ ziri ezi. Ma 90% nke